China Inflatable kudhirowa yoga yekutamba bhagi mat inflatable air track 0384 Kugadzira uye fekitori | Yamazonhome
Inflatable kudhirowa yoga matanzi ejimu mat inflatable air track 0384
Inflatable kudhirowa yoga yekutamba gym mat 0384#Product ruzivo
#Product zita: inflatable yoga pamutsago
#Product zvinhu: PVC
#Product muitiro: mukuru tembiricha nomoto
#Product ruvara: sezvakaratidzwa (inogadziriswa)
#Product uremu: zvinoenderana chigadzirwa saizi
#Product performance: kushamiswa kwekutora, kudzikisira ruzha, isina-kutedzemuka, isina mvura, hunyoro-chiratidzo
#Scope yekushandisa: huswa, nhandare, nzvimbo dzekuitira
Inflatable kudhirowa yoga yekutamba gym mat 0384
About Kambani yedu
Kambani yedu ikambani yemitero isinganetsi inosanganisa kugadzirwa, kugadzirisa, kugovera uye Wholesale. Bhizimusi hombe ndere inflatable trampolines, inflatable masiraidhi, inflatable arches, inflatable makatuni, inflatable migero, inflatable mamodheru, inflatable varaidzo dzimba, inflatable dombo kukwira, mvura mabhora, huswa pasi, Mvura paki, yemvura chikepe, chinotenderera, dziva, mvura ichisvetuka mubhedha. Yakakura-pamwero wemubatanidzwa wemvura ndicho chigadzirwa chikuru cheGuangzhou Yuqi Inflatable Products Limited. Zvigadzirwa zvekambani izvi zvinonyanya kutengeswa mudzimba pamitengo yekutengesa kunze; kutumirwa kuUnited States. European Union (UK. France. Germany. Italy. Nezvimwewo) Russia. Middle East Japan, South Korea, Thailand nedzimwe nyika dzeSoutheast Asia. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa nekambani yedu, PVC, TPU, uye PVC mesh jira (isina jira remvura) zvese zvinhu zvine hunyanzvi, murazvo unodzora, uye PVC mesh jira rine 0.45MM-0.55MM, 1000D-1500D zvinhu.
Ukuru uye ruvara rwemhepo cushion inogona kuvezwa. Unogona kusarudza zvatakaronga. Iwe unogona zvakare kugadzira izvo zvaunoda maererano nezvako zvaunofarira. Iyi mhepo yemhepo ine akasiyana masitayera. Unogona kusangana zvakasiyana zvinodiwa nevatengi vakasiyana.
Pane zvakawanda zvinoshandiswa pamakusheni emhepo. Zvakadai seyoga kudzidziswa, kudzidziswa kwekutamba, kwounyanzvi hwekudzidzisa kana kumhanya kuti ushandise senzvimbo yekudzidzira. Iyo mhepo cushion yakasununguka, yakati sandara uye ine yakanaka kukakavara zvivakwa. Unogona kutamba yakanaka kwazvo yekudzivirira.
Yedu inflatable runway yakazara nekatoni imwe chete. Iyi nzira yekupakata iri nyore kubata.
Pashure: Yakasarudzika Taekwondo Somersault Mhepo Cushion Inflatable Gymnastics Kudzidzisa Mat 0382
Zvadaro: Yese Solid Wood Chest yeMadhirowa Ekugara Kamuri yekurara Yemubhedha Nightwatch # 0103
Englewood Duplex Tsuro Hutch Nemusuwo 0226
Minimalist emazuva ano solid solid imba yekutandarira TV sta ...
Yemumba Adult Fenicha Wooden Metal Mubhedha 0212-2
Mobile Regency Security Iron Yaiba Kit Double Sezvo ...